Fepetra sy fepetra | Law Firms Dubai
Inona no atao hoe Bridge Bridge? Legal Bridge dia sehatra teknolojia (vavahadin-tserasera) ho an'ny fifandraisana eo amin'ny mpisolovava sy ny olon-dehibe ho an'ny daholobe. Legal Bridge dia tsy manome torohevitra ara-dalàna. Ireo mpisolovava miditra amin'ny Bridge Bridge dia tsy mpiara-miombon'antoka, mpiasa na agents; antoko fahatelo izy ireo. Legal Bridge dia tsy manome sosokevitra na manohana mpisolovava ato amin'ity tranonkala ity, ary tsy afaka miantoka na manome antoka ny mari-pahaizana na ny mari-pahaizana. Tompon'andraikitra amin'ny fanaovana ny fahazotoanao manokana momba ny mpisolovava rehetra ianao. Tsy misy fifandraisan'ny mpisolovava amin'ny mpanjifa kasaina na noforonina teo aminao sy ny Bridge Legal amin'ny alàlan'ny fampiasanao ny Bridge Bridge. Na dia mety manamora ny fifampidinihana ara-dalàna amin'ny Internet sy ny mpisolovava aza ny Legal Bridge, ny Legal Bridge dia tsy antoko amin'ny fifanarahana fifanarahana azonao atao amin'ny mpisolovava rehetra. Mifanaraka amin'izany, manaiky ianao fa ny Legal Bridge dia tsy tompon'andraikitra amin'ny fihetsika na fanafoanana ny mpisolovava. Ny Bridge Bridge dia tsy manohana na manolotra mpisolovava manokana. Alohan'ny hihazonana mpisolovava na hangataka consultation amin'ny mpisolovava ao amin'ny Legal Bridge dia tokony handinika tsara ny fahalalana sy ny zavatra niainan'ilay mpisolovava ianao. Raha mitazona ny serivisin'ny mpisolovava mihoatra ny fifampidinihana ao amin'ny Bridge Bridge ianao dia tokony hangataka fifanarahana serivisy an-tsoratra momba ny serivisy amin'ny antsipiriany momba ny fehezan-dalàna, anisan'izany ny sarany, ny fandaniana ary ny adidy hafa. Legal Bridge dia tsy tompon'andraikitra amin'ny fanamarinana ny mombamomba azy, ny fahazoan-dàlana na ny fahaizan'ireo mpisolovava miditra amin'ny Bridge Bridge, ao anatin'izany, saingy tsy voafetra, ny fampahalalana voarakitra ao amin'ny piraofilin'ny mpisolovava, toy ny anaran'ny mpisolovava, ny lozisialy, ny anaram-boninahitra, ny mombamomba ny fifandraisana, ny fampianarana fototra fandraisana, faritra fanazaran-tena na fampahalalana hafa. Ny Legal Bridge dia tsy tompon'andraikitra amin'ny famerenana, fanovana, fanovana na fanamarinana ny mombamomba ny mombamomba. Tsy manana andraikitra ny manontany na manamarina raha misy mpisolovava miantehitra amin'ny tsy fitandremana ataon'ny matihanina na fanararaotana. Tompon'andraikitra amin'ny fitandremana ny fahazotoanao manokana momba ny mombamomba na ny fahaizan'ny mpisolovava rehetra ianao. Raha tsy voafaritra mazava eto, ny "Bridge Bridge" dia midika hoe Legal Bridge sy ny tranokalan'ny Attorneyuae.com.
Fifandraisan'ny mpampiasa. Legal Bridge dia toerana iarahan'ireo mpisolovava sy mpisolovava (miaraka "mpampiasa") ifandraisana. Ireo mpampiasa ny tranonkala fa tsy Bridge Bridge, no manome ny atin'ny fifandraisana. Ny Bridge Bridge dia tsy antoko amin'ny fifandraisana eo amin'ny mpampiasa. Legal Bridge dia tsy tompon'andraikitra amin'ny fanovana, fanovana, sivana, lamba, fanaraha-maso, fanekena na fiantohana ny fifandraisana amin'ity tranonkala ity. Ny Bridge Bridge dia mandà ny andraikitra rehetra amin'ny atin'ny fifandraisana misy eo amin'ny mpampiasa amin'ny tranokala na ny fihetsika mety ataonao na tsy azonao atao vokatry ny fifandraisana toy izany. Ianao irery no tompon'andraikitra amin'ny fanombanana sy fanamarinana ny mombamomba sy ny fahatokisana ny loharano sy ny atin'ny fifandraisana rehetra.
Ny Legal Bridge dia tsy mandray andraikitra amin'ny fanamarinana, ary tsy manome solontena na antoka momba, ny mombamomba na ny fahatokisan'ny mpisolovava na ny mpisolovava na ny atin'ny fifandraisana rehetra ato amin'ity tranonkala ity. Araka ny fampiasa eto, ny fifandraisana dia misy, fa tsy ferana, izay fifandraisana ampitaina aminao avy amin'ny mpampiasa mivantana na ankolaka mifandraika amin'ity tranonkala ity. Ny fifandraisana dia misy, saingy tsy ferana, ny fifandraisana ataon'ny mpisolovava amin'ny Legal Bridge, ao anatin'izany ny mombamomba azy. Voafetra ny serasera eto amin'ity tranonkala ity, tsy misy fanombanana na fitsidihana ataon'ny olona, ​​ary tsy asiana fiarovana sy fomba fanao mahazatra amin'ny fanombanana sy fitsidihana ataon'ny olona. Na eo aza ireo voalaza teo aloha, ny Bridge Bridge dia manana ny zony, saingy tsy adidy, mandrara na mamafa ny fifandraisana amin'ny Bridge Bridge. Raha misy raharaham-pitsarana misy eo aminao ny raharaham-pitsaranao, zava-dehibe ny fahatsapanao fa misy fitoriana tokony apetraka, na hamaly, ao anatin'ny fe-potoana iray na mety hisy fiantraikany ratsy amin'ny zonao izany. Noho izany, raha mandà ny hisolo tena anao ny mpisolovava iray dia ampirisihina ianao hanontany avy hatrany amin'ny mpisolovava iray hafa mba hiarovana ny zonao. Ny fanapahan-kevitry ny mpisolovava iray tsy hisolo tena anao dia tsy tokony horaisinao ho fanehoan-kevitra momba ny fahamendrehanao. Legal Bridge dia manasongadina dinika ahafahan'ny mpampiasa mandray anjara amin'ny adihevitra ankapobeny momba ny lalàna, miresaka ny fahaizan'ny mpisolovava na lohahevitra tsy tsiambaratelo hafa. Ny fifandraisana dia mety tsy arovana raha tsy ambara avy amin'ny tombontsoan'ny mpisolovava na ny fotopampianarana hafa.
tsiambaratelo; Tombontsoa. Legal Bridge dia mety misy dinika ifanakalozan-kevitra sy fiasa tsy mendrika amin'ny firesahana vaovao miafina na torohevitra ara-dalàna. Ny fampahalalana tsiambaratelo dia mety misy, saingy tsy voafetra ho, ny anaranao, fampahalalana mifandraika, fampahafantarana vaovao momba ny olona na fikambanana hafa, porofo na fanekena ny adidy sivily na heloka bevava, na fampahalalana hafa momba ny raharaham-pitsaranao. Ny tanjon'ny dinika sy ny fiasa amin'ny Bridge Bridge dia ny adihevitra ankapobeny momba ny lalàna sy ny fahaizan'ny mpisolovava. Ny Bridge Bridge dia tsy tompon'andraikitra amin'ny fanambarana tsy fantatra na fanahy iniana. Azo heverina fa ny fifandraisana amin'ny tranokala ity dia mety horaisina na hosakanan'ny ankolafy fahatelo, ao anatin'izany ireo tsy mpisolovava, noho ny fandikan-dalàna, ny tsy fetezan'ny rafitra, ny fikojakojana ny tranokala, na noho ny antony hafa. Ireo mpampiasa an'ity tranokala ity dia mihevitra fa mety horaisin'olon-kafa ny fifandraisan'izy ireo ary mety tsy ho voaro amin'ny famoahan-kevitry ny mpisolo vava mpisolovava na fotopampianarana tombontsoa hafa, ary manaiky ny tsy hitana andraikitra amin'ny Legal Bridge amin'ny tranga toy izany. Ny fampahalalana sy serivisy omen'ny Legal Bridge dia fananana voajanahary ary niaiky ny mpampiasa fa tsy mpifaninana amin'ny Legal Bridge izy ary manaiky ny tsy hizara izany vaovao izany amin'ireo mpifaninana amin'ny Bridge Bridge. Manaiky ihany koa ianao fa ny fahasimbana ara-bola amin'ny fanitsakitsahana an'ity fizarana ity dia mety tsy ho ampy ary ny Bridge Bridge dia manan-jo hahazo fanampiana vonjimaika, raha tsy misy ny fangatahana famatorana. Ity fizarana ity dia haharitra amin'ny famaranana ity fifanarahana ity mandritra ny roa (2) taona, na raha mbola mitoetra ho tsiambaratelon'ny raharaham-barotra eo ambanin'ny lalàna sy ny lalàna mifehy azy, na oviana na oviana ny fe-potoana voalaza.
Fanontaniana ara-dalàna. Ny fangatahana ara-dalàna ataon'ny mpampiasa ("Cases") ao amin'ny Bridge Bridge dia azo alefa amin'ny antoko fahatelo ary / na mailaka amin'ny mpisolovava sy ny mpisolovava. Ireo mpampiasa dia tsy tokony handefa na handefa vaovao izay tsy tian'izy ireo hambara amin'ny besinimaro. Ireo mpisolovava izay tsy misolo tena anao, na tsy mpisolovava, na mpikambana amin'ny besinimaro dia mety hijery Cases. Ny tranga dia mety tsy arovana raha tsy ambara avy amin'ny tombontsoan'ny mpisolovava na ny fotopampianarana momba ny vokatra. Voarara ny fandefasana vaovao tsiambaratelo na fanamelohana izay mety hampiasaina aminao ho porofo na fanekena tompon'andraikitra sivily na heloka bevava. Ireo mpampiasa mandefa tranga dia manaiky ny hifandraisan'ny mpisolovava sy ny antoko fahatelo, ao anatin'izany ny Legal Bridge. Ny valintenin'ny mpisolovava dia afaka miditra amin'ny antoko fahatelo sy / na mailaka amin'ny antoko fahatelo ao anatin'izany ny mpisolovava sy ny tsy mpisolovava. Na izany aza, manan-jo tsy hamoaka, tsy handefa mailaka, na hanitsy na hamafa tranga hafa ny Legal Bridge, ary zonay koa ny tsy hamoaka, tsy handefa mailaka, na hanova na hamafa izay valiny amin'ny tranga rehetra. Amin'ny Bridge Bridge, ny fangatahana-mpisera dia azo antsoina hoe "mpanjifa" indraindray ary ny mpisolovava dia azo antsoina hoe "mpisolovava," "mpisolovava" na "mpisolovava anao" na "mpisolovava anao." Na izany aza, raha misy tokoa ny fifandraisana amin'ny mpisolovava sy ny mpanjifa dia mety ho fanontaniana marina izay miovaova arakaraka ny faritra iankinan'ny fahefana, ary ny fampiasana ireo teny ireo ao amin'ny Legal Bridge dia tsy tokony horaisina ho toy ny solontenan'ny Legal Bridge fa misy ny fifandraisan'ny mpanjifa mpisolovava.
Fakan-kevitra voalohany amin'ny sehatra voalohany. Ireo mpampiasa dia mety handray anjara amin'ny dinika voalohany voafetra ao amin'ny Bridge Bridge amin'ny sarany. Bridge Bridge dia azo ampiasaina handefasana fifandraisana sy fandoavam-bola ho an'ny fakan-kevitra voalohany amin'ny ambaratonga voafetra eo amin'ny mpampiasa sy ny mpisolovava. Ny sarany dia azo alalana alohan'ny alàlana, alefa, afindra na haverina amin'ny fomba izay heverin'ny Legal Bridge amin'ny fahefany tokana sy feno. Ny fandoavam-bola dia tsy manome zon'ny fangatahana-fangatahana mpanjifa handray consultation voalohany na serivisy hafa avy amin'ny mpisolovava. Ny Querying-Users dia manaiky fa ny mpisolovava-mpampiasa dia manan-jo hanafoana ny tolotra hanaovana consultation voalohany alohan'ny na aorian'ny fandoavana ny vola amin'ny antony rehetra, ao anatin'izany fa tsy voafetra amin'ny: ny famantarana ny mety hisian'ny fifanoherana mahaliana na tena izy, ny fifanolanana amin'ny fandaharam-potoana, na raha mino ny mpisolovava fa tsy manana fahaizana mifandraika amin'izany izy hanome consultation an'ilay User-fangatahana. Manaiky ireo mpampiasa fa ny fakan-kevitra momba ny Bridge Bridge dia voafetra amin'ny alalàn'ny toro-hevitra savaranonando mifototra amin'ny fampahalalana navoakan'ny mpampiasa fangatahana tao amin'ny tranokala Legal Bridge. Ny mpampiasa fangatahana dia mahatakatra sy manaiky fa izay torohevitra voaray dia natiora voalohany ary tsy mihetsika ho mpisolo toerana ny fizahana ifotony sy ny fandinihana feno ataon'ny mpisolovava mahay. Ny mpisera fangatahana dia mahatakatra bebe kokoa ary manaiky fa tamin'ny fotoana nifampidinihana voalohany tao amin'ny Bridge Bridge, ny mpisolovava dia tsy mahazo miditra amin'ny fampahalalana rehetra ilaina mba hanomezana torohevitra ara-dalàna feno ho an'ny mpampiasa fangatahana, ary izay toro-hevitra voaray avy amin'ny fangatahana-Mpampiasa noho izany dia voajanahary mialoha. Ny mpisolovava dia tsy manana adidy hanome serivisy ara-dalàna mihoatra ny fakan-kevitra voalohany. Raha manapa-kevitra ny mpampiasa iray hitazona serivisy fanampiny an'ny mpisolovava ao amin'ny Bridge Bridge, ny mpampiasa fangatahana dia tokony hangataka ny hiditra amin'ny fifanarahana serivisy ara-dalàna voasoratra amin'ny antsipiriany momba ny fepetra sy ny fifanolanana, ao anatin'izany ny sarany rehetra, ny fandaniana ary ny adidy hafa. Manaiky ny ankolafy rehetra fa ny Legal Bridge dia tsy antoko manana solontena mety hitranga ankoatry ny fakan-kevitra voalohany voafetra, ary manaiky ny hitazona ny tetezana ara-dalàna ho an'ny fifanolanana rehetra mipoitra avy amin'izany solontena izany.
Mpikambana mpisolovava. Ireo mpisolovava dia afaka mamorona mombamomba ny Bridge Bridge ary manao consultations amin'ny Legal Bridge. Ny vola azo avy amin'ny fakan-kevitra voalohany voaloa dia azo apetraka ao amin'ny kaonty banky nosafidian'ny mpisolovava. Ny tombony azon'ny mpisolovava tsirairay azon'izy ireo atao dia miankina amin'ny drafitra maha mpikambana ao amin'ny mpisolovava azy. Ireo mpisolovava dia afaka manafoana ny maha-mpikambana azy ireo amin'ny fotoana rehetra ary tsy manan-jo handoa vola amin'ny pro-rata na amin'ny lafiny hafa. Ireo mpisolovava dia miaiky sy manaiky fa ny Legal Bridge dia manan-jo hanitsy ny tombotsoan'ny drafitra maha mpikambana isanisany amin'ny fotoana rehetra ary ny fanafoanan'ny mpisolovava azy ireo dia ny fanafoanana ny maha-mpikambana azy ireo.
Saran'ny serivisy. Ny Bridge Bridge sy ny mpiara-miasa aminy dia mety hampihena ny saram-pandraharahana amin'ny fandoavam-bola ataon'ny fangatahana-Ireo mpampiasa momba ny fakan-kevitra mifototra amin'ny ambaratongan'ny mpisolovava-mpisera. Ny saram-panompoana dia mety hitovy amin'ny 50% amin'ny fifampidinihana amin'ireo mpikambana fototra ary 20% ho an'ny mpikambana matihanina. Ny saram-panompoana dia mifototra amin'ny serivisy marketing sy teknolojia nomen'ny Legal Bridge. Manaiky ireo mpampiasa fa ara-drariny sy mitombina ny saram-panompoana. Ny tetezana ara-dalàna dia afaka manova ny tahan'ny saram-panompoana amin'ny fotoana rehetra na amin'ny antony inona na amin'ny fahalalahana tanteraka na tsia.
Fandoavam-bola. Ny Bridge Bridge dia manefa ny fandoavam-bola amin'ny alàlan'ny sehatra fandoavam-bola an-tserasera Stripe. Ireo mpampiasa rehetra manefa na mandray fandoavam-bola amin'ny alalàn'ny Bridge Legal dia manaiky ny fepetra momba ny serivisy hita ao amin'ny www.stripe.com. Hiantohana ny serivisy tsy tapaka ary ahafahan'ny mpampiasa mividy mora ny vokatra sy serivisy fanampiny, Bridge Bridge sy / na Stripe dia mety mitahiry ny fomba fandoavanao vola amin'ny rakitra. Aza adino fa adidinao ny mitazona ny fampahalalana momba ny faktiora ankehitriny amin'ny rakitra miaraka amin'ny Bridge Bridge. Ny serivisy fanodinana fandoavam-bola ho an'ireo mpampiasa eo amin'ny Bridge Bridge dia omen'ny Stripe ary iharan'ny fifanarahana kaonty Stripe Connected, izay misy ny Fepetran'ny tolotra Stripe (miaraka, ny "Fifanarahana Serivisy Stripe"). Rehefa manaiky ireo fepetra ireo ianao na manohy miasa amin'ny maha-mpampiasa anao amin'ny Bridge Bridge, dia manaiky ianao fa voafatotry ny fifanarahana Stripe Services, satria io no azo ovaina avy amin'ny Stripe indraindray. Amin'ny maha-Bridge Bridge lalàna anao ahafahan'ny serivisy fanodinana vola amin'ny alàlan'ny Stripe, dia manaiky ianao hanome loharanom-baovao marina sy feno momba anao sy ny orinasanao, ary manome alalana anao ny Legal Bridge hizara izany sy ny fampahalalana momba ny fifanakalozana mifandraika amin'ny fampiasanao ny serivisy fanodinana vola omena avy amin'i Stripe.
Ny andraikitry ny mpisolovava momba ny ady, ny fahaiza-manao ary ny fahazoan-dàlana. Ny mpisolovava rehetra dia tsy maintsy miantoka ny tsy hisian'ny fifandirana mahaliana ary ny mpisolovava dia afaka manome an-tsakany sy an-davany ny fakan-kevitra voalohany nangatahina. Ny sarany nalain'ny mpisera fangatahana dia tsy andoavana ny mpisolovava raha tsy efa nomena ny fifampidinihana voalohany. Noho izany, raha misy olana manakana ny mpisolovava tsy ho afaka hanome ny fifampidinihana voalohany, ny mpisolovava dia manana adidy hamarana haingana ny fifampidinihana voalohany araka izay tratra ary mamela ny fangatahana-Mpampiasa hahazo famerenam-bola sy / na hisafidy iray hafa mpisolovava-User. Ny mpisolovava rehetra dia manome alalana fa manana fahazoan-dàlana hampihatra ny lalàna sy manana toerana tsara miaraka amin'ny fikambanan'ny bara iray na maromaro any Etazonia amin'ny fotoana famoronana kaonty Legal Bridge sy amin'ny fotoana anolorana sy fanomezana serivisy fakan-kevitra amin'ny fangatahana. -Users. Manaiky ireo mpisolovava fa hampiato ny tolotra sy ny fanomezana serivisy eo amin'ny sehatry ny Bridge Bridge ary esoriny eo noho eo ny kaontiny avy amin'ny Legal Bridge raha aato na esorina ny fahazoan-dàlana hampiasa lalàna.
Ny andraikitry ny mpisolovava hafa. Ho fanampin'ireo adidy etsy ambony momba ny fifanolanana, ny fahaiza-manao ary ny fahazoan-dàlana, ireo mpisolovava dia nanaiky fa raha manolo-tena hanome consulat ara-dalàna voalohany momba ny Bridge Bridge izy ireo, dia hamaly haingana sy am-pitandremana ireo mpampiasa. Manaiky ny mpisolovava fa hamita ny fifampidinihana voalohany izy ireo ary handefa fotoana azo trandrahana ao anatin'ny telo (3) andro aorian'ny alohan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny fifanakalozan-kevitra amin'ny mpanjifa. Ireo mpisolovava dia nanaiky fa very ny zon'izy ireo handoa vola raha toa ka tsy nahavita ny fifampidinihana voalohany izy ireo ary nanolotra fotoana tamin'ny fe-potoana farany. Ny mpisolovava dia miaiky fa azo antoka ny fahafaham-po amin'ny fangatahana-mpampiasa, ary ny sarany rehetra izay iadian-kevitra amin'ny antony rehetra dia tsy voaloa.
Fampandrenesana momba ny etika. Raha toa ianao ka mpisolovava mandray anjara amin'ny lafiny rehetra amin'ity tranonkala ity dia ekenao fa ny Fitsipi-pitondran-tena momba ny fahefana izay manana fahazoan-dàlana ("Fitsipika") dia mihatra amin'ny lafiny rehetra amin'ny fandraisanao anjara ary hanaja ireo fitsipika ireo ianao. Ireo lalàna ireo dia misy, saingy tsy voafetra ho, ny lalàna mifandraika amin'ny tsiambaratelo, dokam-barotra, fangatahana mpanjifa, fampiharana lalàna tsy nahazoana alalana, ary fanaporofoana diso ny zava-misy. Ny Bridge Bridge dia manilika ny andraikitra rehetra amin'ny fanarahana ireo fitsipika ireo. Manaiky ny hitazona tsy mampijaly ny lalàna ny Bridge Bridge amin'ny fanitsakitsahana ny etika ataon'ny mpisolovava mampiasa ity tranonkala ity. Manaiky ireo mpisolovava fa hitazona tsiambaratelo ny fampahalalana rehetra sy ny fifandraisana azo avy amin'ity tranokala ity, ao anatin'izany fa tsy ferana amin'ny fampahalalana momba ny serivisy Legal Bridge.
Politika Fiarovana fiainan'olona. Ny fiarovana ny fiainanao manokana dia zava-dehibe amin'ny Legal Bridge. Azafady mba avereno jerena ny Politikanay momba ny tsiambaratelo izay manazava ny fomba itondran'ny Bridge Bridge ny mombamomba anao sy hiarovana ny fiainanao manokana.
Fepetra ampiasaina. Ny atiny amin'ity tranonkala ity dia ho an'ny fampiasanao manokana fa tsy ho fanararaotana ara-barotra. Tsy azonao atao ny mampiasa an'ity tranonkala ity hamaritana ny fahafahan'ny mpanjifa mahazo: (a) trosa na fiantohana ho an'ny tena manokana, fianakaviana na tokantrano; b) asa; na (c) fahazoan-dàlana na tombontsoa avy amin'ny governemanta. Mety tsy handrava, hamboarina injeniera, hanala trano, hofan-trano, hofan-trano, hindrana, hivarotra, hamorona asa hafa avy amin'ity tranonkala ity ianao. Azonao atao koa ny mampiasa rindrambaiko fanaraha-maso na fitadiavana tambajotra hamaritana ny maritrano tranokala, na haka vaovao momba ny fampiasana, ny mombamomba ny tsirairay na ny mpampiasa. Mety tsy mampiasa robot, hala, rindranasa na fitaovana mandeha ho azy hafa ianao, na fizotran-tanana hanaraha-maso na handika ny tranokalanay na ny atiny raha tsy nahazo alalana voasoratra teo aloha izahay. Tsy azonao atao ny mampiasa an'ity tranonkala ity handefasana fifandraisana diso, mamitaka, diso na tsy ara-dalàna. Tsy azonao atao ny mandika, manova, mamerina, mamoaka indray, mizara, mampiseho, na mandefa ho an'ny tanjona ara-barotra, tsy ahazoana tombony na ampahibemaso, na amin'ny ampahany amin'ity tranokala ity, afa-tsy amin'ny fetra voalaza etsy ambony. Tsy azonao atao ny mampiasa na manondrana na mandefa indray ity tranokala ity na ny ampahany aminy, na ny atiny izay manitsakitsaka ny lalàna mifehy ny fanondranana sy ny fitsipiky ny Etazonia. Voarara ny fampiasana tsy ara-dalàna an'ity tranonkala ity na ny atiny.
Tsy misy fampiasana tsy ara-dalàna na voarara. Ho fepetra amin'ny fampiasanao ny tranokala Legal Bridge dia manome alalana amin'ny Bridge Bridge ianao fa tsy hampiasa ny tranokala Legal Bridge amin'ny tanjona tsy ara-dalàna na voararan'ireto teny sy fepetra ary fanamarihana ireto. Azonao atao ny tsy mampiasa ny tranokala Legal Bridge amin'ny fomba mety hanimba, hanafoanana, hanavesatra entana, na hanimba ny tranokala Legal Bridge na hanelingelina ny fampiasan'ny antoko hafa sy ny fankafizany ny tranokala Legal Bridge. Mety tsy mahazo ianao na manandrana mahazo fitaovana na fampahalalana amin'ny alàlan'ny fomba tsy niniana natao na nomena tamin'ny alàlan'ny tranokala Legal Bridge. Ny tetezana ara-dalàna dia tsy azo ampiasaina afa-tsy amin'ny fangatahana-Mpampiasa sy mpisolovava-mpampiasa mba hanaovana fakan-kevitra momba ny lalàna an-tserasera. Voarara tanteraka ny fampiasan'ny Mpampiasa izay tsy mangataka-Mpampiasa na mpisolovava-mpampiasa izay tsy ferana amin'ny fanaovana consultation ara-dalàna an-tserasera.
Zonay sy andraikitray. Ny Legal Bridge dia tsy mpamoaka na mpanoratra fifandraisana ara-dalàna na atiny amin'ity tranonkala ity. Toerana iray hifandraisana eo amin'ny Users. Legal Bridge dia tsy tompon'andraikitra amin'ny famerenana, fanovana na fanekena ny fifandraisana. Na dia tsy afaka miantoka antoka feno amin'ny fiarovana ny rafitra aza izahay, Legal Bridge dia mandray fepetra mirindra mba hitazomana ny filaminana. Raha manana antony inoana ianao fa voahitsakitsaka ny fiarovana ny rafitra dia mifandraisa aminay amin'ny alàlan'ny mailaka. Raha hitan'ny mpiasa ara-teknika ao amin'ny Legal Bridge fa miteraka loza mitatao amin'ny fampandehanana ara-teknika ny rafitra na ny fiarovana ny mpikambana hafa ny fisian'ireo rakitra na fizotran'ny fizotran'ny mpikambana hafa, Legal Bridge dia manan-jo hamafa ireo rakitra ireo na hampiato ireo fizotrany ireo. Raha miahiahy ny mpiasa ara-teknika Legal Bridge fa misy mpampiasa mampiasa ny olona iray izay tsy nahazo alalana avy amin'ny mpampiasa azy, Legal Bridge dia mety hanakana ny fidiran'ny mpampiasa azy io mba hitahirizana ny filaminan'ny rafitra. Zon'ny Legal Bridge, amin'ny fahalalantsika irery sy tanteraka, (i) hanovana, hampiasana na hanova ny atiny hafa, (ii) manasokajy indray ny atiny rehetra hametrahana azy amin'ny toerana mety kokoa na (iii) efijery mialoha na hamafa izay atiny rehetra izay tapa-kevitra fa tsy mendrika na amin'ny fomba hafa manitsakitsaka ireo fampiasa amin'ny fampiasana ireo, ao anatin'izany fa tsy voafetra amin'ny atiny misy fiteny sy dokam-barotra manafintohina. Ny Bridge Bridge dia manan-jo handà ny serivisy ho an'iza na iza ary hanafoana ny fidiran'ny mpampiasa amin'ny fotoana rehetra. Manaiky ianao fa ny Legal Bridge dia tsy tompon'andraikitra amin'ny fitazomana na famokarana angona izay navoaka na notahirizina tao amin'ny Legal Bridge. Manaiky ianao fa ny Bridge Bridge dia tsy manana adidy mamokatra na manome vaovao na data navoaka tao amin'ny Bridge Bridge ho anao na antoko fahatelo na inona na inona antony.
Ny zonao sy ny andraikitrao. Tompon'andraikitra amin'ny fifandraisana ara-dalàna sy ara-pitondran-tena ianao amin'ny fifandraisana rehetra avoakanao na ampitainao amin'ny fampiasana an'ity tranonkala ity. Tompon'andraikitra amin'ny fanajana ny zon'ny hafa ianao, ao anatin'izany ny zon'ny manan-tsaina (zon'ny mpamorona, ny patanty ary ny mari-pamantarana), ny zon'ny fiainana manokana ary ny zo tsy hanala baraka na hanendrikendrehana. Manome alalana ny Bridge Bridge amin'ny asa rehetra noforoninao tao amin'ity tranokala ity ianao ho anisan'ny fizotran'ny famerenana mahazatra. Manan-jo hanala ny asanao rehetra ao amin'ny tranokala ianao amin'ny fotoana rehetra. Ny fandefasana atiny ho an'ny hetsika tsy ara-dalàna dia fanitsakitsahana ireo fepetra fampiasana ireo. Misokatra ho an'ny mpikambana manerantany ny Legal Bridge, ary ny Legal Bridge dia tsy afaka manome antoka fa tsy hanana olana ara-dalàna any amin'ny faritra hafa amin'ny fifandraisanao ianao. Raha manana fitarainana momba ny fitondran-tena na ny fifandraisan'ny Mpampiasa hafa ianao dia anjaranao ny manandrana mamaha ny fifanolanana, mazàna amin'ny alàlan'ny fifandraisanao mivantana amin'ilay olona, ​​raha azo atao. Raha ny mahazatra, Legal Bridge dia tsy handray anjara amin'ny fanelanelanana ny fifandirana misy eo aminao sy ireo mpampiasa hafa. Ny Bridge Bridge dia tsy mandray andraikitra amin'ny fitondran-tenanao na ny an'ny mpampiasa hafa. Na eo aza izany voalaza teo aloha izany, raha misy ny fitarainana na fifanoherana toy izany, ny mpampiasa na ny mpampiasa dia mety hangataka ny hiditra an-tsehatra amin'ny Bridge Bridge sy hanandrana hamaha ny fifanolanana. Ny fangatahana rehetra toy izany dia tsy antoka fa hitsabahan'ny Legal Bridge (i), (ii) hiditra an-tsehatra ara-potoana, (iii) hamaha ny fifanolanana ho an'ny ankolafy iray na ny hafa na (iv) hamaha ny raharaha. Ny fanapaha-kevitra hiditra an-tsehatra dia miankina amin'ny Legal Bridge, amin'ny fahaizantsika irery sy tanteraka. Ny fahafahanao miditra amin'ny Bridge Bridge dia ho anao irery ihany. Raha te-hizara indray ny fifandraisana hitanao amin'ity tranokala ity ianao dia anjaranao ny mahazo alalana avy amin'ny mpanoratra ny serasera (sy olona hafa manan-jo). Manaiky ianao hanampy amin'ny fiarovana ny kaontinao sy ny fiarovana ny mpampiasa hafa amin'ny fitandremana ny teny miafinao. Raha manana antony hinoanao fa voatarika ny tenimiafinao na nisy ny fampiasana tsy nahazoana alalana ny kaontinao, dia manaiky ianao hifandray amin'ny Legal Bridge haingana araka izay tratra.
Atiny tsy mety. Rehefa miditra amin'ny tranokala ianao dia manaiky fa tsy hampakatra, hampidina, hampiseho, hanatanteraka, handefa na hizara atiny hafa izay: (i) manala baraka, manala baraka, vetaveta, mamoa fady, manararaotra na mandrahona; b) manohana na mandrisika ny fitondran-tena izay mety hamorona heloka bevava, miteraka andraikitra ara-panjakana na manitsakitsaka lalàna na lalàna eo an-toerana, fanjakana, firenena na vahiny mihatra; na (c) manao doka na raha tsy izany mangataka vola na fangatahana entana na serivisy. Ny Bridge Bridge dia manan-jo hamarana na hamafa ireo fitaovana ireo amin'ny mpizara azy. Ny Bridge Bridge dia hiara-hiasa amin'ny tompon'andraikitra amin'ny masoivoho na masoivoho amin'ny famotopotorana ny fanitsakitsahana ireo fepetra fampiasana ireo na amin'ny lalàna mifandraika amin'izany. Avelanao ny fangatahana na ny taratasy firaketana ny subpoena avy amin'ny Legal Bridge, ao anatin'izany nefa tsy voafetra amin'ny fampahalalana na data navoaka tao amin'ny Legal Bridge noho ny antony rehetra.
Rohy mankamin'ny tranokalan'ny antoko fahatelo. Ity tranonkala ity dia mety misy rohy mankamin'ny tranonkala fehezin'ny antoko ankoatry ny Legal Bridge. Legal Bridge dia mety manome rohy mankany amin'ny citation na loharano hafa izay tsy ifandraisany. Ny Legal Bridge dia tsy tompon'andraikitra ary tsy manohana na mandray andraikitra amin'ny fisian, atiny, vokatra, serivisy na fampiasana tranokala antoko fahatelo, tranokala azo idirana avy amin'izany na fanovana na fanavaozana an'ireo tranokala ireo. Ny Bridge Bridge dia tsy manome antoka momba ny atiny na kalitaon'ny vokatra na serivisy omen'ny tranonkala toy izany. Ny Legal Bridge dia tsy tompon'andraikitra amin'ny webcasting na amin'ny endrika fampitana hafa azo avy amin'ny tranokalan'ny antoko fahatelo. Ny fampidirana rohy rehetra dia tsy midika fankatoavana avy amin'ny Legal Bridge an'ny tranokalan'ny antoko fahatelo, ary tsy midika koa izany fa ny Legal Bridge dia mpanohana, mifandray na mifandray, manome antoka, na mahazo alalana ara-dalàna hampiasa anaram-barotra, marika famantarana, logo, tombo-kase ara-dalàna na ofisialy, na marika manana zon'ny mpamorona izay azo hita taratra amin'ireo rohy. Manaiky ianao fa miatrika ny risika rehetra mifandraika amin'ny fidirana sy fampiasana atiny omena ao amin'ny tranokalan'ny antoko fahatelo ary manaiky fa ny Legal Bridge dia tsy tompon'andraikitra amin'ny fahaverezana na fahasimban'ny karazana mety ho azonao amin'ny fifandraisanao amin'ny antoko fahatelo.
Tompony. Ity tranonkala ity dia tompon'andraikitra amin'ny Legal Bridge, LLC. Tsara daholo, lohateny sy fahalianana ary amin'ireo fitaovana omena amin'ity tranonkala ity, ao anatin'izany fa tsy voafetra amin'ny fampahalalana, antontan-taratasy, logo, sary, sary ary sary dia an'ny Legal Bridge na avy amin'ny mpanoratra, mpamorona na mpivarotra antoko fahatelo avy. Afa-tsy izay nomen'ny Legal Bridge mazava tsara, tsy misy fitaovana azo adika, haverina, havoaka indray, alaina, alefa, apetraka, aseho, ampitaina na zaraina amin'ny fomba hafa ary tsy misy na inona na inona ato amin'ity tranonkala ity azo adika hanome lisansa ambanin'ny Bridge Bridge rehetra. zon'ny fananana ara-tsaina, na amin'ny estoppel, na tsia na amin'ny fomba hafa. Ny zon'ireo izay tsy nomena mazava eto dia natolotry ny Legal Bridge.
Copyrights. Ny famolavolana tranonkala, ny lahatsoratra, ny sary, ny fisafidianana ary ny fandaminana azy dia fananan'ny Legal Bridge, REHETRA REHETRA REHETRA.
Famantarana. Tetezana ara-dalàna, ny sary sy ny lahatsoratra rehetra, ary ny lohapejy rehetra, sary namboarina ary sary famantarana ny bokotra dia marika famantarana, marika famantarana sy / na akanjo varotra Legal Bridge, LLC. Ny mari-pamantarana hafa, ny anaran'ny vokatra ary ny anaran'ny orinasa na ny logo voalaza eto dia fananan'ny tompony avy.
Fialana andraikitra amin'ny andraikitra. Ny fampahalalana, rindrambaiko, vokatra ary serivisy tafiditra ao na misy amin'ny alàlan'ny tranokala Legal Bridge.com dia mety misy tsy fahatomombanana na hadisoan-tsoratra. Ny fanovana dia ampiana tsindraindray amin'ny fampahalalana eto. Ny Bridge Bridge sy / na ny mpiara-miasa aminy dia mety manatsara sy / na manova ny tranokala Legal Bridge.com amin'ny fotoana rehetra. Ny torohevitra voaray tamin'ny alàlan'ny tranokala Legal Bridge dia tsy tokony hiankina amin'ny fanapahan-kevitra manokana, ara-pitsaboana, ara-dalàna na ara-bola ary tokony hanantona olona matihanina mifanaraka amin'ny torohevitra manokana mifanaraka amin'ny toe-javatra iainanao ianao. Ny Bridge Bridge sy / na ny mpiara-miasa aminy dia tsy maneho ny maha-mety azy, azo itokisana, misy, fotoana voafetra, ary marina ny fampahalalana, rindrambaiko, vokatra, serivisy ary sary mifandraika hita ao amin'ny tranokala Legal Bridge.com na inona na inona antony. Raha faran'izay avelan'ny lalàna manan-kery, ny fampahalalana rehetra, rindrambaiko, vokatra, serivisy ary sary mifandraika amin'izany dia omena "toy ny" tsy misy fiantohana na fepetra misy. Ny tetezana ara-dalàna sy / na ireo mpiara-miasa aminy dia manafoana ny fiantohana sy ny fepetra rehetra momba ity fampahalalana ity, rindrambaiko, vokatra, serivisy ary sary mifandraika amin'izany, ao anatin'izany ny fiantohana na ny fepetra momba ny varotra, ny fahasalamana ho an'ny tanjona manokana, lohateny ary tsy fanitsakitsahana. Amin'ny fetra farany ambony avelan'ny lalàna manan-kery, na inona na inona tranga dia tsy tompon'andraikitra amin'ny teti-dratsy mivantana, ankolaka, sazy, zava-nitranga, manokana, vokatr'asa na fahasimbana na inona na inona tafiditra ao, tsy misy fetrany, ny tetezana ara-dalàna sy / na ny mpiara-miasa aminy. , data na tombom-barotra, mipoitra avy na amin'ny fomba rehetra mifandraika amin'ny fampiasana na fanatanterahana ny tranokala Legal Bridge.com, miaraka amin'ny fahatarana na tsy fahaizana mampiasa ny tranokala Legal Bridge.com na serivisy mifandraika amin'izany, ny fanomezana na tsy fanomezana serivisy, na ho an'ny fampahalalana rehetra, rindrambaiko, vokatra, serivisy ary sary mifandraika azo tamin'ny alàlan'ny tranokala Legal Bridge.com, na mivoaka avy amin'ny fampiasana ny tranokala Legal Bridge.com, na mifototra amin'ny fifanarahana, fampijaliana, fanaovana tsirambina, tompon'andraikitra henjana na raha tsy izany, na dia notoroana hevitra momba ny mety hisian'ny fahasimbana aza ny Bridge Bridge na ny iray amin'ireo mpiara-miasa aminy. Satria ny fanjakana / faritra sasany dia tsy mamela ny fanilikilihana na ny fetran'ny andraikitra noho ny fahasimbana vokatr'izany na noho ny sampona, dia mety tsy hihatra aminao io fetra voalaza etsy ambony io. Raha tsy afa-po amin'ny ampahany amin'ny tranokala Legal Bridge.com ianao, na amin'ireo fepetra fampiasana ireo, ny vahaolana tokana sy tokana anao dia ny fampitsaharana ny fampiasana ny tranokala Legal Bridge.
Tsy misy Warranty. Ny tranokala sy ny fitaovana rehetra, ny antontan-taratasy na ny endrika omena amin'ny na amin'ny alàlan'ny fampiasanao ny tranokala dia omena amin'ny fototra "as is" sy "raha misy". Amin'ny fetra farany navelan'ny lalàna, ny Bridge Bridge dia manilika amin'ny fomba mazava ny karazan-kery rehetra, na mazava izany na tsia, ao anatin'izany fa tsy voafetra amin'ny fiantohana ara-barotra, fahasalamana ho an'ny tanjona manokana, lohateny ary tsy fandikan-dalàna. Ny Bridge Bridge dia tsy manome antoka fa: (a) hamaly ny zavatra takinao ny tranonkala na ny fitaovana; b) ny tranokala na ny fitaovana dia ho hita amin'ny fotoana tsy miato, ara-potoana, azo antoka na tsy misy hadisoana; (c) ny valiny azo avy amin'ny fampiasana ny tranokala, na izay fitaovana atolotra amin'ny alàlan'ny tranokala, dia marina na azo itokisana; na (d) ny kalitaon'ny vokatra, serivisy, fampahalalana na fitaovana hafa novidinao na azonao tamin'ny alàlan'ny tranokala na miankina amin'ny fitaovana dia hahatratra ny antenainao. Ny fahazoana fitaovana amin'ny alàlan'ny fampiasana ny tranokala dia atao araka ny safidinao manokana sy atahorana anao. Ny Bridge Bridge dia tsy tompon'andraikitra amin'ny fahasimbana amin'ny rafitry ny solosainao na ny fahaverezan'ny angona azo avy amin'ny fampidinana atiny, fitaovana, fampahalalana na rindrambaiko.
Fepetran'ny andraikitra sy ny fanonerana. Ianao dia mitazona ny tetezana ara-dalàna sy ny mpiadidy, ny talen'ny, ny mpiasa ary ny mpiasan'ny lalàna ary tsy hanonitra ny tetezana ara-dalàna noho izay fahasimbana tsy mivantana, sazy, manokana, sendra na vokatr'izany, na izany aza dia mipoitra (ao anatin'izany ny saram-pandrika sy ny fandaniana rehetra ary ny fandaniana amin'ny raharaham-pitsarana. arbitration, na amin'ny fitsarana na amin'ny fampiakarana raharaha, raha misy, na na tsia ny fitsarana na fananganana arbitration), na amin'ny hetsika fifanarahana, tsy fitandremana, na hetsika fampijaliana hafa, na mipoitra avy na mifandraika amin'ity fifanarahana ity, anisan'izany ny tsy ferana na inona na inona fangatahana fandratrana manokana na fahasimban'ny fananana, naterak'ity fifanarahana ity sy ny fanitsakitsahana ny lalàna federaly, fanjakana, na eo an-toerana, lalàna, lalàna, na lalàna, na dia efa nampianarina ny Legal Bridge aza ny mety hisian'ny fahasimbana toy izany. Raha misy tompon'andraikitra hita eo amin'ny lafiny Bridge Bridge, dia hoferana ho an'ny vola aloa amin'ny vokatra sy / na serivisy izany, afa-tsy ny avela mifanaraka amin'ny fifanarahana arbitration momba ireo fepetra fampiasana ireo, ary tsy misy vokany izany. na fanonerana. Ny fanjakana sasany dia tsy mamela ny fanilihana na famerana ny fahasimbana mitranga na vokatr'izany, noho izany ny fetra na fanilihana etsy ambony dia mety tsy hihatra. Na ahoana na ahoana, ny Bridge Bridge, ny orinasany mifandraika amin'izany, na ny talen'ny orinasa tsirairay, ny tompon'andraikitra, ny mpikambana, ny mpiasa, ny tompon'andraikitra, ny mpiara-miasa aminy, ny mpiara-miombon'antoka amin'ny fizarana na ny maso ivoho dia tompon'andraikitra amin'ny saram-pitsarana na ankolaka, manokana, vokatr'izany, tranga, ohatra, na sazy isan-karazany amin'ny karazana sazy (ao anatin'izany, tsy misy fetrany, ny fahasimban'ny fahaverezan'ny karama, ny tombom-barotra, ny fampiasana na ny angon-drakitra), na izany aza dia naterak'izany, na fanitsakitsahana ny fifanarahana, fanaovana tsirambina na eo ambanin'ny teoria ara-dalàna hafa, na azo jerena mialoha na tsia ary na tsia Ny tetezana ara-dalàna dia notoroana hevitra ny amin'ny mety hisian'ny fahasimbana toy izany, ary na eo aza ny tsy fahombiazan'ny tanjona ilaina amin'ny fanafody voafetra. Manaiky ny mpampiasa fa ireo fetra amin'ny andraikitra ireo dia ny fizarana loza mety hitranga ary hita taratra amin'ny sarany nifanarahan'ny roa tonta. Ny fetran'ny adidy voafaritra ao anatin'ity fifanarahana ity dia singa fototra ifotoran'ny fifampiraharahana ary ireo mpifanaraka dia tsy hiditra amin'ny fifanarahana ara-dalàna hanome ny serivisy raha tsy misy Fifanarahana amin'ireto fetra ireto. Ankoatra ny adidim-panazavana ataon'ny mpampiasa ho an'ny tetezana ara-dalàna eo ambanin'ity fifanarahana ity, dia tsy tokony hihoatra ny vola ampiasain'ny mpampiasa ny tetezana ara-dalàna mihoatra ny fe-potoana telo volana, ary ny iray hafa dia tsy miovaova. DOLLARS ($ 1,000.00).
Safidin'ny lalàna. Amin'ny fampiasana an'ity tranonkala ity dia ekenao mazava fa ny zonao sy ny adidinao dia hofehezina sy hadika mifanaraka amin'ny lalàn'ny State of California, tsy manilika ny safidin'ny lalàna mifidy azy. Izay hetsika ara-dalàna na fizotrany mifandraika amin'ny fidiranao na fampiasanao ny tranokala dia fehezin'ny Fifanarahana Arbitration amin'ity fampiasa ity. Ireo fehezan-dalàna amin'ny fampiasana ireo dia manilika sy mandà ny fepetra voafaritry ny Fifanarahana UN momba ny fifanarahana amin'ny fivarotana entana iraisam-pirenena, izay tsy mihatra amin'ny fifampiraharahana natao tamin'ny alàlan'ity tranonkala ity.
Fanapahan-kevitra momba ny fifanolanana; Fanelanelanana. Bridge Bridge ary manaiky ianao hanandrana hamaha ny tsy fifanarahana rehetra tsy ara-potoana mandritra ny 30 andro alohan'ny fametrahana ny arbitration. Raha sanatria tsy afaka mamaha ny fifanolanana izahay ary farafaharatsiny 30 andro izay no lasa taorian'ny nahitan'ny ankolafy rehetra ny fisian'ny fifandirana, Legal Bridge ary manaiky ianao handamina ny fifanolanana rehetra sy ny fitakiana eo aminay eo alohan'ny mpitsara tokana. Ny karazam-pifanolanana sy ny fanekena izay ekenay hamaritana dia natao hovadika amin'ny fomba malalaka. Izy io dia mihatra, tsy misy fetra, amin'ny: fanambarana mipoitra avy na mifandraika amin'ny lafiny rehetra amin'ny fifandraisana misy eo aminay, na mifototra amin'ny fifanarahana, fampijaliana, lalàna, hosoka, fanoloran-tena diso, na teoria ara-dalàna hafa; fanambarana izay nipoitra talohan'ireto na fehezanteny teo aloha (ao anatin'izany, saingy tsy ferana, ny fanambarana mifandraika amin'ny doka); fanambarana izay foto-kevitry ny raharaham-pitsarana heverina ho kilasy izay tsy mpikambana ato amin'ny kilasy voamarina ianao; ary ny fanambarana izay mety hipoitra aorian'ny famaranana ireo fe-potoana ireo. Ho an'ny tanjon'ity fifanarahana Arbitration ity, ny firesahana ny "Bridge Bridge", "izahay" sy "us" dia misy ny zanatsika tsirairay, ny mpiara-miasa, ny agents, ny mpiasa, ny teo alohany, ny zanabola, ny mpandimby ary ny nanendry, ary koa ny mpampiasa nahazo alalana na tsy nahazo alàlana. na mpandray tombotsoan'ny serivisy na vokatra eo ambanin'ireto fe-potoana ireto na izay fifanarahana teo aloha teo aminay. Na eo aza izany voalaza teo aloha izany, ny andaniny sy ny ankilany dia mety handray ny andraikiny tsirairay any amin'ny tribonaly fitakiana kely. Manaiky ianao fa, amin'ny alàlan'ireto fehezanteny ireto, ianao sy ny Bridge Bridge dia samy mamela ny zon'ny mpitsara na handray anjara amin'ny hetsika ao am-pianarana. Ireo teny ireo dia manaporofo ny fifanakalozana na fampiasana tranokala amin'ny varotra iraisam-pirenena, ary noho izany ny Federal Arbitration Act dia mifehy ny fandikana sy ny fampiharana an'io fepetra io. Ity fepetra arbitration ity dia haharitra amin'ny famaranana ireo teny ireo. Ny antoko mikasa ny hametraka hetsika any amin'ny tribonaly fitakiana kely na mitady arbitration dia tsy maintsy alefan'i Etazonia aloha mail voamarina, Fanamarihana misy ny fifanolanana ("Fampandrenesana") ho an'ny ankilany, izay halefa amin'ny: 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware 19958, County of Sussex (ny "Adiresy fampandrenesana"), ary ny kopian'ny elektronika dia tokony nalefa tamin'ny alàlan'ny mailaka hanohanana @ Legal Bridge.com. Ny Fanamarihana dia tsy maintsy a) mamaritra ny toetoetra sy ny fototry ny fitakiana na ny fifanolanana ary b) mamaritra ny fanampiana manokana tadiavina ("fangatahana"). Raha Legal Bridge ary tsy mahazo fifanarahana hamaha ny fitakiana ao anatin'ny 30 andro aorian'ny nahazoana ny Filazana dia mety hanomboka ny fizotran'ny fitsarana ianao na Bridge Bridge. Mandritra ny arbitration, ny habetsaky ny tolotra omen'ny Legal Bridge na ianao dia tsy hampahafantarina amin'ny arbitrator raha tsy aorian'ny faritan'ny arbitrator ny vola, raha misy, izay azonao na ny Bridge Bridge. Ny arbitration dia hitondran'ny Prosed Resolution Resolution Dispute and the Procedure Supplementary for Consumer Related Disputes (miaraka, ny "Fitsipika AAA") an'ny American Arbitration Association (ny "AAA"), izay novaina tamin'ireto fehezan-teny ireto, ary hotantanina ny AAA. Ny Fitsipika AAA dia misy amin'ny Internet ao amin'ny www.adr.org na amin'ny fiantsoana ny AAA amin'ny 1-800-778-7879. Ny arbitrator dia voafatotry ireo teny ireo. Ny arbitrator dia hamoaka fanapahan-kevitra an-tsoratra voamarina ampy hanazavana ny zava-misy marina momba ny zava-misy sy ny fehin-kevitra mifototra amin'ny lalàna. Manaiky ny ankolafy fa ny loka na ny valin'ny zava-misy na ny fehinkevitry ny lalàna natao tamin'ny fifandaminana ny fifanolanana na ny fitakiany dia natao ho an'ny tanjon'io arbitrage io ihany, ary tsy azon'ny olon-kafa na antokon'olona ampiasaina amin'ny arbitration any fifandirana na fangatahana mahatafiditra Legal Bridge. Manaiky ny roa tonta fa amin'ny lafiny ara-dalàna ny fifanolanana na ny fitakiana dia tsy hiankina amin'ny fiatraikany na amin'ny lafiny inona na amin'ny lafiny inona na amin'ny fifanolanana na amin'ny fehin-kevitra navoakan'ny lalàna na amin'ny arbitration hafa misy amin'ny fifanolanana na fitakiana izay antoko Bridge Bridge. Ny arbitrator dia afaka manome fanampiana vonjimaika ho an'ny ankolafy tsirairay mitady fanampiana ary amin'ny fotoana ilana izany fanampiana izany. IANAO sy ny tetezana ara-dalàna dia manaiky fa samy hitondra fitakiana ny fanoherana ny hafa ihany ao amin'ny toeranao manokana fa tsy ho toy ny mpanafika na mpikambana ao amin'ny kilasy ao anaty kilasy na solontenam-panjakana REHETRA. Ny arbitrator dia tsy manan-kery hanao fahadisoana amin'ny lalàna na ny fiheverana ara-dalàna, ary ny roa tonta dia manaiky fa ny loka rehetra dia azo esorina na ahitsy amin'ny fampiakarana raharaha ataon'ny roa tonta amin'ny tribonaly manan-kery noho izany lesoka izany. Ny antoko tsirairay dia samy hitondra ny vidiny sy ny sarany avy amin'ny fampiantsoana azy rehetra. Ny arbitrator dia tsy hanome fanamaivanana mihoatra ny zavatra omen'ireto fehezan-teny ireto na manome onitra sazy na fanonerana hafa tsy refesin'ny fahavalo tena izy. Ankoatr'izay, raha tsy hoe samy manaiky ianao sy ny tetezana ara-dalàna, dia tsy afaka manambatra mihoatra ny iray ny fangatahan'ny arbitratora ary tsy mahazo miahy ny endrika solontena na fizotran'ny kilasy. Raha hita fa tsy azo ampiharina io proviso manokana io, dia ho foana sy foana ny fitsipiky ny fitsinjaram-pahefana rehetra. Ny lafiny rehetra amin'ny fizotry ny fitsarana, sy ny fanapaha-kevitra, ny fanapahan-kevitra na ny loka azon'ny arbitrator, dia ho tsiambaratelo tanteraka, ankoatry ny ampahan'ny antso amin'ny tribonaly manam-pahefana mahefa. Ny Arbitrator, fa tsy ny federaly, fanjakana, na fitsarana na masoivoho eo an-toerana, dia manana fahefana manokana hamaha ny fifanolanana rehetra mifandraika amin'ny fandikana, ny fampiharana, ny fampiharana na ny fananganana ity fifanarahana ity, ao anatin'izany, saingy tsy ferana amin'ny, fitakiana rehetra na ny ampahany amin'ity fifanarahana ity dia foana na afaka.
Famerana / Famerana ny fidirana. Ny Bridge Bridge dia manana ny zony, amin'ny fahefany irery, hamarana ny fidiranao amin'ny tranokala Legal Bridge.com sy ny serivisy mifandraika amin'izany na ny ampahany aminy amin'ny fotoana rehetra, tsy misy fampandrenesana.
Fanovana. Zon'ny Legal Bridge dia manan-jo hanova ny teny, ny fepetra ary ny fampandrenesana atolotra ny tranokala Legal Bridge, ao anatin'izany fa tsy voafetra amin'ny fiampangana mifandraika amin'ny fampiasana ny tranokala Legal Bridge. Anjaranao ny mandinika ireo fepetra fampiasana ireo isaky ny misy fanovana, izay natao tsy nisy fampandrenesana taminao.
Fahalalana. Amin'ny alàlan'ny fampiasana ny serivisy Legal Bridge na ny fidirana amin'ny tranokala Legal Bridge, dia ekenao fa valo ambin'ny folo taona (18) taona no ho miakatra ianao, fa namaky sy nahatakatra ireo fomba fampiasana ireo ary manaiky ianao fa hamatotra azy ireo.